Faritra ifantohan’ny tetikasa - PADAP
Ao anatin’ny sehatry ny tetikasa PADAP, “tontolo” foana matetika no iantsoana ireo toerana ifantohan’ny tetikasa. Io voambolana io dia manondro manokana ireo perimetatra rehetra izay mamorona loharanon’ny rano ho an’ny rafitra fanondrahana iray.
Ireo toerana 5 ifantohan’ny tetikasa natsangana tany Avaratra, Atsinanana ary Andrefan’i Madagasikara
Amin’izao fotoana izao, ny PADAP dia miasa amin’ny distrika dimy any Avaratra, Atsinanana ary Andrefana eto Madagasikara. Noho ny fanampian’ny mpiara-miombon’antoka isan-karazany dia afaka nametraka toerana iasana iray any Andapa, izay ao amin’ny faritra SAVA, ao amin’ny faritanin’i Diego-Suarez ny Minisiteran’ny Fambolena sy ny Fiompiana. Ireo mpisehatra amin’ny tetikasa koa dia miasa ao Soanierana Ivongo sy Iazafo any amin’ny faritra Analanjirofo, faritanin’i Toamasina. Nisy toerana hafa koa napetraka ao amin’ny faritanin’i Mahajanga. Misy iray any Bealanana, any amin’ny faritra Sofia ary iray hafa any Marovoay, any amin’ny faritra Boeny
Ireo antony nisafidianana ireo toerana hanaovana ny tetikasa
Ireo faritra hanaovana ny tetikasa PADAP dia tsy notsongaina fahatany fa nosafidina izy ireo noho ny fisian’ireo faritra betsaka famatsian-drano avy amin’ny fitoeran-drano azo ampiasaina. Ny faritra misy rano dia manana anjara toerana lehibe amin’ny famokarana ny fambolena sakafo. Noho izany, izy ireo dia miantoka ny fidiram-bola amin’ny fambolena ary amin’ny fiantohana ara-tsakafo amin’ny faritra sy ny firenena.
Ireo toerana ireo koa dia manana fahafahana hivoatra ara-toekarena eo amin’ny lafiny fambolena, fa indrindra amin’ny fitantanana sy fitehirizana ny rano izay mihasimba hatrany ary miteraka olana amin’ny fahafahan’ny mponina manovo rano.
Misongadina ihany koa ireo faritra ireo noho ny fiarovana ny fahafahany mivoatra ara-tontolo iainana sy ny zava-manan’aina misy ao aminy izay mendrika ny ho arovana tokoa.
Ireo mampiavaka an’ireo faritra tsirairay misy ny tetikasa PADAP
Misy tontolo iainana, rafitra fambolena, rafitra ara-tsosialy sy andrim-panjakana ireo faritra dimy izay misy ny tetikasa. Misy lakandrano sy renirano midadasika, manankarena amin’ny fambolena vary, fambolena ary fiompiana ihany koa ny faritry ny morontsiraka atsinanan’Andapa.
I Iazafo dia manana ny mampiavaka azy, amin’ny fananany ireo tohodrano kely, lakandrano fanondrahana, vohitra ary lalana kely fidirana. Ny mponina amin’ity faritra ity dia mazàna mamboly eny amin’ny tehezana. Izany dia ampiasaina amin’ny fambolena sakafo amin’ny ankapobeny.
Mikasika ny Soanierana Ivongo indray, ny mponina ao aminy dia miompana amin’ny fikarakarana ny ala, ny fambolen-kazo ary ny fikojakojana ny lalana.
Ny tontolon’i Bealanana kosa, amin’ny lafiny iray, dia faritra natokana ho an’ny fiarovana. Izany no nahatonga ny fampiharana ny hetsika ”anthropique non consommatrice”.